मुस्कुराउनको लागि आफ्नो मन बनाउनुहोस् - विश्व स्विट्जरल्याण्डको विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल उत्तराधिकार > पत्रिका उत्तराधिकारी 2017-04 > मुस्कान गर्न निर्णय गर्नुहोस्
कोस्टकोमा केही क्रिसमस किनमेल गरिसकेपछि [मन्नोरको जस्तै], म एक बृद्ध-वृद्ध महिलालाई हाँस्दै हाँसदै थिएँ, जुन पार्कि lotमा जाँदा भर्खरै प्रवेश गरिरहेकी थिई। महिलाले मलाई हेरी र सोधिन्: "के भित्रका मानिसहरू बाहिरका मानिसहरूभन्दा पनि उत्तम छन्?" हम्म, मैले सोचें। "म पक्का छैन," मैले भने, "तर म आशा गर्छु कि यो म हुँ!" डिसेम्बर एक व्यस्त महिना हो। तयारी गर्दै क्रिसमस हाम्रो लागि गाह्रो हुन सक्छ र हाम्रो मुडलाई अझ खराब बनाउन सक्छ। उत्सवहरू, घरको सजावट, व्यवसाय परिपत्रहरू, ओभरटाइम, लामो कतारहरू, ट्राफिक जाम र पारिवारिक समयले धेरै स्नायुहरू लिन सक्दछ र हामीलाई वास्तवमा रिसाउन सक्छ। त्यसोभए तपाईं सूचीमा सबैको लागि सही उपहार फेला पार्न र फेरि फेला पार्न चाहानुहुन्छ कि दिँदा धेरै महँगो पर्दछ।
जे पनि गर्न को लागी छ, मलाई लाग्छ त्यहाँ केहि छ जुन तपाईलाई सबैलाई दिन सक्नुहुन्छ यस बर्षको समयमा र तपाईले केहि खर्च पनि गर्नुहुन्न। एउटा मुस्कान! मुस्कान सबै संस्कृतिमा सबै मानिसका लागि उत्तम उपहार हो, सबै भाषाहरूमा, सबै जातिहरू र सबै उमेरहरूमा। तपाईं यसलाई साथीहरू, आफन्तहरू, कामका सहकर्मीहरू र अपरिचितहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। यो सबैलाई फिट गर्दछ र एक व्यक्ति जवान र अधिक आकर्षक देखिन्छ ग्यारेन्टी छ।
मुस्कान एउटा उपहार हो जुन धेरै लाभदायक हुन्छ। जसले मुस्कान दिन्छन् र ती ग्रहण गर्नेहरूका लागि राम्रो छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि मुस्कुराउँदा मुड परिवर्तन हुन सक्छ, तनाव कम गर्न, प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कम गर्न र रक्तचाप कम गर्न; एन्डोरफिन, प्राकृतिक पीडा रिलीभर र सेरोटोनिन पनि शरीरमा जारी गर्न सकिन्छ।
मुस्कान संक्रामक हो - एक सकारात्मक तरिकामा। डा। मनोवैज्ञानिक र सोशल इंटेलिजेंस पुस्तकका लेखक डानियल गोलम्यान बताउँछन् कि यस घटनालाई बुझ्नको लागि एउटा कुञ्जी मिरर न्युरोन भन्ने स्नायु कोशिकामा रहेको छ। हामी सबैसँग मिरर न्युरोनहरू छन्। गोलेमान लेख्छन् कि उनीहरूको एक मात्र काम "मुस्कान चिन्न र हामीलाई हाँसो फिर्ता गराउनु" हो। अवश्य पनि, यो एक अनुहार अनुहारमा पनि लागू हुन्छ। त्यसैले हामी छनौट गर्न सक्छौं। के हामी रुचाउँछौं कि मानिसहरूले रिसाएर हामीलाई हेर्छन् वा उनीहरू हामीमाथि हाँस्छन्? के तपाईंलाई थाहा छ नक्कल मुस्कानले तपाईंलाई आनन्दित तुल्याउन सक्छ?
हामी बच्चाहरु बाट पनि सिक्न सक्छौं। एक नवजात शिशु एक तटस्थ अनुहार भन्दा मुस्कुराउने अनुहार मनपर्छ। शिशुहरु आफ्ना प्रियजनहरुलाई खुशी र खुशी को मुस्कुराउने अनुहार देखाउँछन्। बच्चाहरु को बारे मा कुरा गर्दै, बच्चा को बारे मा के छ कि यो छुट्टी को मौसम को प्रतीक हो? येसु मानिसहरुकहाँ आउनुभयो ताकि उनीहरु मुस्कुराउने कारण हुन्। उहाँ आउनु अघि त्यहाँ कुनै आशा थिएन। तर उनको जन्म को दिन मा एक ठूलो उत्सव थियो। "र तुरुन्तै स्वर्गदूत संग स्वर्गका सेनाहरु को भीड थियो, जसले भगवान को प्रशंसा गरे र भन्यो, उच्चतम मा भगवान को महिमा, र उहाँको राम्रो इच्छा को मानिसहरु बीच पृथ्वी मा शान्ति" (लूका २: -2,8-१४)।
क्रिसमस आनन्द र मुस्कानको उत्सव हो! तपाईं सजावट गर्न, मनाउन, किनमेल गर्न, गाउन, र तपाईंको परिवारसँग समय खर्च गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं मुस्कुराउनुहुन्न भने, तपाईं वास्तवमै उत्सव मनाउँनुहुन्न। हाँसो! तपाईं निश्चित रूपमा यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसले कुनै पनि हिर्काउँदैन! यसले ओभरटाइम वा पैसा खर्च गर्दैन। यो एक उपहार हो जुन पारित हुन पाउँदा खुशी छ र त्यो तपाईंलाई फिर्ता दिन्छ। म सहयोग गर्न सक्दिन तर कल्पना गर्नुहोस् कि जब हामी अन्य मानिसहरूलाई हाँस्दछौं, येशू पनि हामीमाथि हाँस्नुहुन्छ।
हामी कसरी सफलतापूर्वक हाम्रो निर्णय लागू गर्न सक्दछौं भन्ने बारे सुझावहरू
पहिले, मुस्कान जब तपाई बिहान उठ्नुहुन्छ, कसैले पनि देखेको छैन भने पनि। यसले दिनको धुन निर्धारण गर्दछ।
दिनभरि तपाईंले भेट्ने मानिसहरूलाई हाँस्नुहोस्, चाहे उनीहरू तपाईंमाथि हाँस्छन् वा गर्दैनन्। यसले तपाईंको दिनको धुन निर्धारित गर्न सक्छ।
फोन प्रयोग गर्नु अघि मुस्कुराउनुहोस्। यो तपाइँको टोनको संगीत निर्धारण गर्दछ।
जब तपाईं क्रिस्मस संगीत सुन्नुहुन्छ र ख्रीष्टको जन्मको बारेमा सोच्नुहुन्छ मुस्कुराउनुहोस्। यो तपाइँको आध्यात्मिक जीवन को धुन निर्धारित गर्दछ।
तपाईं सुत्नु भन्दा पहिले मुस्कुराउनुहोस् र दिनको समयमा तपाईंले सामना गर्नु भएको सानो चीजको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यो राम्रो रात निद्रा को लागी मेलोडी निर्धारित गर्दछ।